शीर्ष5ब्रसेल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू | एक ट्रेन सेव
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 14/09/2020)
तपाईं इतिहास संग सम्पर्कमा मिल्यो, कला, र ब्रसेल्स को संस्कृति र तपाईं अब शहर सीमाना बाहिर अन्वेषण गर्न तयार छन्. Luckily, ब्रसेल्स देखि एक दिन यात्रा भित्र अन्वेषण गर्न धेरै पनि छ. धेरै त, हामी को सूची राख्न निर्णय गरेको5बस तपाईं को लागि ब्रसेल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राको!
1. ब्रसेल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू: प्रयोग
घेंट छ हाम्रो5ब्रसेल्स सूचीबाट सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राको किनभने यो बेल्जियम मध्ययुगीन सम्पत्तिहरू को एक र यसको सांस्कृतिक मूल्य भएकोमा जानिन्छ, अर्थात्; संगीत, थिएटर, फिलिम, र दृश्यहरु. यो ब्रसेल्स गर्न सुपर नजिक पनि छ, स्थित मात्र 60 ब्रसेल्स देखि किलोमिटर र गर्न सक्छन् सजिलै पुग्न रेल बाट.
यो आकर्षक मध्ययुगीन शहर मा गर्न सबै भन्दा राम्रो कुरा को एक खुट्टा गरेर अन्वेषण गर्न छ, एक झलक फसाउन यसको अविश्वसनीय मध्ययुगीन वास्तुकला, साथै यसको जीवंत वातावरण महसुस गर्न.
प्रशंसा को रहस्यवादी थुमाको Adoration भित्र स्थित भ्यान Eyck भाइहरूमा सेन्ट Bavo गिरजाघर. घेंट को Belfry भ्रमण, को टाउन हल, र शहर व्यापार इतिहास नजिक को मा प्राप्त पुरानो माछा बजार.
एनी फ्रैंक हाउस मा पछिल्लो सम्पर्कमा प्राप्त, को Rijksmuseum मा कला सिक्न, Van Gogh र रेम्ब्रान्टका हाउस संग्रहालयहरु, र प्रसिद्ध Heineken अनुभव आनन्द. Adventurous यात्री बाइक भाडामा र सडकमा अन्वेषण गर्न, ऐतिहासिक स्थलहरू, र एम्स्टर्डम को मुख्य पबहरूमा. त्यहि समयमा, एक आराम आनन्द लिई रहनुभएको बेलामा romantics एक अद्वितीय एम्स्टर्डम अनुभव हुन सक्छ डुङ्गा सवारी.
यो मात्र लिन्छ 2.5 ब्रसेल्स देखि घण्टा त्यहाँ प्राप्त गर्न. तपाईं एक पटक रेल बन्द हप, महान् Duchy राजधानी टाउको र Kirchberg चौथाई र यस्तो न्याय युरोपेली अदालतले रूपमा यसको धेरै महत्त्वपूर्ण भवन अन्वेषण आफ्नो भ्रमण सुरु, र युरोपेली आयोग. को Notre Dame गिरजाघर मा marvel, पूर्ण पुनर्जागरण adornments संग लेट गोथिक वास्तुकला जोडती एक ल्यान्डमार्क. को आसपास भटक जारी आकर्षक सडकमा. महान् ड्यूक को महल को एक झलक र शहर fortifications पक्रने नछुटाउनुहोस्.
123 को किलोमिटर रमणीय दृश्य Belgiums राजधानी र यो रोचक ठाँउ बीच झूट. तथापि, तपाईं पनि धेरै somber ठाउँहरू भ्रमण गर्न तयार हुनुपर्छ. Ypres पहिलो विश्व युद्ध मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेले र यहाँ ठाउँ लिए कि भीषण लडाई समयमा र वरपरको क्षेत्रमा सैनिकहरु को एक पुस्ता को हानि देखे.
धेरै बेल्जियम शहर जस्तै, बजार वर्ग वास्तुकला को एक प्रभावशाली एरे समावेश. को मध्ययुगीन वास्तुकला रहलपहल धेरै पुनःस्थापित गरिएको छ किनभने यो पनि छ. एक सुखी टिप्पणी, तपाईं एक foodie छन् भने, त्यसपछि तपाईं परम्परागत फ्लेमिश भोजन र पाठ्यक्रम पाउनेछन्, बियर.
ब्रसेल्स परे अन्वेषण गर्न तयार? हो? एक ट्रेन सेव तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्, कुनै लुकेको शुल्क र एक चिल्लो र सहज बुकिंग प्रक्रिया. सजिलो!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सजिलो दिन मिलान रेल देखि यात्रा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-from-brussels/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
bruges ब्रसेल्स Daytrips घेंट लक्समबर्ग ट्रेन यात्रा सल्लाह यात्रा traveltips